3 Akụkọ na ihe omume 21 dị mkpa na ọnọdụ GEO - Bido 2019 - Geofumadas
3 Akụkọ na ihe omume 21 dị mkpa na ọnọdụ GEO - Bido na 2019
Febụwarị, 2019 Geospatial - GIS, Engineering, innovations
Bentley, Leica na PlexEarth so na ihe ndị kacha atọ ụtọ na-amalite na Febụwarị 2019. Ọzọkwa, anyị na-egosi na anyị achịkọtara ihe omume 21 na-atọ ụtọ nke dị n'ụzọ, nke obodo niile nke ndị ọkachamara na mbara igwe nwere ike isonye. Fọdụ isiokwu a tụlere na ihe omume ndị a bụ: BIM, GIS, PDI, Geostatistics, imewe, CAD yana IoT.
Jụọ onye ọkachamara - mbipụta MicroStation CONNECT
Bentley amalitela nke a, dị ka ụzọ ọzọ bara uru maka ndị ọrụ na-achọkarị ndụmọdụ na-enyeghị nkwado nkwado nke akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ webinars nke ngwa ahụ. Nke a na ebe nchekwa ga m zụlitere na otu n'ime ihe ndị dị na London, azụ mgbe cadastral usoro a Central American obodo chọrọ akwaga si Geographics ka BentleyMap a set nke ngwa mepụtara, ihe 4500 faịlụ na DGN na akụkọ ihe mere eme kọmpụtà na kwesịrị rue Iha gbasara ohere .
Na nkenke, ha bụ nnọkọ n'efu akpọrọ "Jụọ Ọkachamara", na Tuesday na elekere 12 nke ehihie, US Eastern oge na 1 PM London oge.
Lee ị nwere ike isonyere, iji mara banyere nsogbu ndị na-abịa.
Dịka ọmụmaatụ, ndị a bụ isiokwu ndị a ga-ewere na izu ndị na-esonụ:
12-Feb nhazi nhazi usoro oru na ọrụ na ndenye ngwa ngwa
19-Feb Migration applications mepụtara VBA, BMR na MDL
26-Feb Ọrụ igwe ojii maka nyocha ngwa ngwa
Ejirila Leica Geosystems buru ibu mara ọtụtụ afọ dị ka otu n'ime ogidi nke okike, njikwa na nlekota nke teknụzụ ndị e ji eme ihe n'oge a, site na mbara ala, nchekwa, nchekwa, injinịa ruo n'ihe owuwu. Na February 7, a mara ọkwa na mmekorita ya na SVAB, ụlọ ọrụ raara nye mmepe nke ngwaahịa maka ndị na - egwupụta ala -site na njikwa, na sensọ na njikwa-; akwụ ụgwọ, ha abụọ ewepụtawo otu n'ime ihe ngwọta maka njikwa igwe, lekwasịrị anya na arụpụta nke iXE3 na iGW3. Ihe ngwọta a abụghị ihe ọzọ karịa sistemụ dabere na ịnakwere Quantum SVAB ngwaọrụ.
Ọ bụrụ na anyị na-echeta, ihe Leica iXE3 icon bụ a usoro na-enye ohere akara nke ígwè na 2D na 3D na elu kpọmkwem, site na a na-achịkwa panel nwere ike ịmepụta teren ụdị, na-enye mgbanwe na ubi; ugbu ndị iGW3, bụ a ezigbo oge n'ọnọdu nke agụba - na excavator ịwụ, ime mgbanwe ozugbo ma zere emefu oge verifying kpọmkwem leveling ndị a.
Usoro nke Leica + SVAB, bụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ, ọ bụ kpamkpam wireless - ejiri ya na Bluetooth Low Energy (BLE) jikọọ ya, ọ nwere ike ịchọpụta nke bụ ngwá ọrụ nke ngwaọrụ nke usoro nke nchapu, ma chọpụta ụdị usoro ma ọ bụ ngwaọrụ dị n'ime igwe.
Ejikọtara usoro a dị iche iche na teknụzụ ndị a mepụtara n'oge gara aga, iXE3 na iGW3, bụ nke sụgharịrị iji rụọ ọrụ dị ukwuu ma dị irè nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Operatorsfọdụ ndị ọrụ na-agbanwe bọket ọtụtụ ugboro n'ụbọchị; Site na ntọala njirimara ngwá ọrụ, a na-ewepụ ihe ize ndụ nke njehie mmadụ. Mmekọrịta na nghazi njikwa igwe pụtara na onye ọrụ kwesịrị ilekwasị anya na otu panel
Otu uru dị na sistemụ a bụ mmezi nke usoro maka ndị na-arụ ọrụ igwe, na-ewepụ mkpa ọ dị iji aka gbanwee ntọala. Na mgbakwunye, ọ na - egbochi onye ọrụ ọ bụla (novice ma ọ bụ ọkachamara) iji bọket shọvel ezighi ezi, mepụta oge na nkwughachi nke ogwugwu ebe ọ bụ na sistemụ ahụ na - ekwurịta okwu - ọ na - ezipụ ọkwa ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ ahọrọ ngwá ọrụ na - enweghị usoro nyocha ngwa ọrụ - ma rụọ ọrụ n’ụzọ zuru oke. Uru ọzọ bụ na ọ na-amata ngwa ọrụ dịka ọkọlọtọ tilt ọkọlọtọ na mbughari tilt rotators.
Usoro njirimara ngwá ọrụ na-akọwa ụkpụrụ ọhụrụ nke na-eji uru nke ozi eji arụ ọrụ ngwaọrụ ahụ.
Anyị na-atụ anya, site n'akụkụ a, ogo ngwaahịa a, dịka ha rụzuru na trauma niile nke Leica, na-elegharaghị Co-kere SVAB anya, ndị bụ ndị isi na-enye ngwaahịa na mpaghara ahụ. hydraulic. N'oge na-adịghị anya, anyị ga-ahụ ngwa nke usoro ihe a na uru ọ na-eweta.
Plexscape + Nnụnụ i
Imirikiti maara Plexscape maka ịbụ ndị mmepe nke ihe a na-akpọ PlexEarth, otu n'ime ihe ndị bụ isi maka ndị ọkachamara na-eji sistemụ CAD arụ ọrụ nke ọma nke ọrụ AEC (Architecture, Engineering and Construction). Plexscape na njikọ TranSoft nwere nso nso a, yana mmekorita ọhụụ ya na Bird.i anaghị akwụsị itu anyị n'anya; otu ikpo okwu iji nweta ma lelee onyonyo sitere na satịlaịtị ma ọ bụ ikuku, nke na-enweta data site na ụfọdụ n'ime ndị ukwu nọ n'ọhịa nke onyonyo dịka: AIRBUS, Digital Globe, Bluesky, or planet. Bird.i jikọtara ịnweta ihe oyiyi na usoro ọgụgụ isi, iji nweta data dị elu maka ahịa AEC na usoro.
Ọ dị mkpa ka e nwee njikọ nke ihe ahụ e kwuru na mbụ, dị ka azịza maka nsogbu niile ahụ na-eme, mgbe ị na-arụ ọrụ ọ bụla metụtara ihe oyiyi na usoro geoengineering; dịka ọmụmaatụ: ịzụta ihe oyiyi dị elu (ọnụ ahịa dị elu), njehie na imewe, igbu oge ma ọ bụ nhazi na ihe osise n'efu na enweghị ike nke ojiji, ịdị ala ma ọ bụ ịdabere.
Na Plexscape, anyị na-agba mbọ ka anyị gbanwee ụzọ ndị injinia na-arụ ọrụ n'iji arụ ọrụ, ịrụ ọrụ, na ịrụ ọrụ (AEC) site n'ịchịkwa ọdịiche dị n'etiti imewe na ụwa dị adị. " kwuru. Lambros Kaliakatsos, Onye guzobere na CEO nke Plexscape.
PlexEarth na Bird.i emepụtala usoro nke na obere ụlọ ọrụ, ọkara ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ, nke a na-achịkwa n'ọhịa nke ewu, mmanụ, gas, nsị, ma ọ bụ ume ọhụrụ, nwere ike iji onyonyo satịlaịtị n'ime nyiwe CAD dịka AutoCAD . Inweta oge na data nke geospatial na-enye onye ọrụ CAD ohere ịmepụta data emelitere, nke ka mma-ntọala na nlebara anya gbasara oghere gbasara ohere, ọsọ ọsọ na mfe.
Anyị kwenyesiri ike na mmekọrịta anyị na Bird.i ga-ekwe ka ndị ọkachamara nke AEC jiri obi ike zuru ezu tụpụta ma mee usoro ha n'ọzọ ọzọ site na ntinye ngwa ngwa na ọdịnaya dị oke.
Kedu ka esi eme usoro a?
Ọfọn, akpa Bird.i na ọ na-arụ ọrụ na akpọchi ohere elu-ọgwụgwụ Onyonyo, na aka nke ọzọ, a maara na PlexEarth, na flagship nke Plexscape, nwere ọtụtụ akụrụngwa dabeere na ígwé ojii na-ewu ewu na-akụkụ Autodesk ngwaọrụ, ọ ga-enyere na cataloging, nkesa na nhọrọ nke kpọmkwem ihe oyiyi na-achọ ọrụ, nke mere na mgbe e mesịrị nwere ike na-eji na imewe Filiks na data management, dabeere na AEC.
Agenda nke ihe
Nke a bụ ndepụta nke ihe ndị ahụ e kwuru n'elu, họrọ otu n'ime mmasị gị ma ọ ga-ewega gị na ndebanye aha.
Eprel 24 - Ghọta uru njigide igwe ojii. Ịmata uru nke eserese na igwe
20 Febụwarị- Ntọala nke ngalaba ọrụ okporo ụzọ na ArcGIS. Ịmepụta usoro ihe eji eme njem na ArcGIS
12 February - Ọmụmụ GIS: OpenUtilities - February. SIG Onodu: OpenUtilities
12 February - PostGIS arụ ọrụ na-ewu ewu iji melite mkpebi nke nsogbu spatial. Ihe arụ ọrụ PostGIS dị mma iji meziwanye Nsogbu Nsogbu nke Spatia
12 nke Febụwarị-GIS Atumatu: Ezigbo ihe nlele maka EMEA. SIG Ihe Omume: Ezigbo Ihe Nlereanya maka EMEA
13 February- Ihe omumu nke GIS: OpenRoads - February.
13 February- SIG Atumatu: Nhazi usoro nyocha
27 Febụwarị - Nwelite ọhụrụ nke nkà na ụzụ na nkà na ụzụ na ihe ọmụma dị mkpa nke GEINT. Mmelite ohuru na Geospatial Technology Competency Model & the GEOINT Isi Ihe Ọmụma
27 nke February- Imeziwanye nke Grid Grid Modisationisation
Febụwarị 28- routezọ na-aga nke ọma na atụmatụ dị elu na TBEST. Ụzọ na-aga n'ụzọ dị irè na Nkwụsị Nkwụsị na TBEST
7 March- Lelee data gị na mpaghara ọhụrụ site na iji Gis 3d. Hụ data gị na ọhụrụ Dimension Site Iji 3d Gis
13 March- Jiri nlezianya ụwa mee ihe iji nyochaa mmefu ego nke mmiri maka nlekọta mmiri. Iji ihe ndị dị n'ụwa mee ihe iji nyochaa ego nchịkwa mmiri maka nchịkwa mmiri
16 nke Eprel- Nyocha ihuenyo na nhazi usoro oge site n'iji Data Surfer Data na Nyochaa Oge Oge Iji Nyocha
12 February OpenRoads Designer: mgbanwe iji gbanwee
Site na 12 nke February ruo 9 nke Eprel- Mmalite ka nhazi BIM 360. Okwu Mmalite nke BIM 360 Design
14 February - Ozi gbasara 3D na Infraworks. Ihe ohuru na Civil 3D & Infraworks
19 maka February Ngwá Usoro: Okwu Mmalite nke ụlọ ọrụ ahụ
21 February - Atụmatụ na aghụghọ iji arụ ọrụ data igwe mmadụ. Atụmatụ na atụmatụ maka ịrụ ọrụ na Data Demographic
27 February - Nzube dị elu maka ala akwa: OpenBridge Designer, a Bentley BIM solution. Ngosipụta ngwa ngwa dị elu maka njikọ dị elu: OpenBridge Designer, na Bentley BIM Solution
5 March - Iwebata nke ọgụgụ isi ọnọdụ na ngwa weebụ nke na-eme ka ahụmịhe ọrụ ahụ dịkwuo mma. Embedding ebe ọgụgụ isi na ngwa Weebụ nke na-eme ka Onye Ọrụ Nweta
Machị 13 - Webinar: Ojiji nke GIS mepere emepe iji tinye ọrụ geospatial na CAD ọrụ - March 13, 2019. Webinar: Iji Nzuzo Iyi Mmalite GIS iji mejuputa arụmọrụ Gosphon na CAD - 13th March 2019
Previous Post«Previous Geotech + Dọnetech: ị gaghị ahapụ ya
Next Post Kedu otu m si nweta VenezuelaNext »